Ukuhombisa amaShiti eNdimbi
Unyango lweMetal Metal
Indawo yokuhlala yophahla lwensimbi
Uphahla lwePlastiki e-Corrugated
Ukufakwa kwefulethi kwePVC
Ungawususa njani na u-Plastated oLwenziweyo wePlanethi
ngu admin nge-20-03-26
Yintoni oya kuyidinga 1.Nokwenza amashiti eplastikhi athengisiweyo. Uphahla lwakho lweplastiki etyhobozekileyo luqhekekile, luphuphumile ukuvuza, okanye lufuna enye into ngenxa ...
Ungazilungisa njani iindawo ezivuzayo kuPhahla oluMgangathweni lwePulasitiki
ngu admin nge-20-03-10
Uphahla lweplastiki enoburhabaxa luyinto enexabiso eliphantsi kwaye luyasebenza ngeendlela ezahlukeneyo, luyenza lukhetho oludumileyo kubaninimzi abaninzi. Njengawo onke amaphahla, uphahla lweplastiki olugqibeleleyo luya kuqala ukuvuza njengoko ixesha lihamba. Olu lulungiso oluqhelekileyo kulo naluphi na uphahla, kwaye kubalulekile ukuba kulungiswe oku kuvuza njengenxalenye yekhaya lakho rhoqo ...
Ungayilungisa njani indawo yePVC
ngu admin nge-20-02-18
Uphahla lwePVC lusetyenziswa kuphahla oluthe tyaba kwaye luphahla. Ngelixa uphahla luthathwa njengolomeleleyo, izinto eziwayo kunye nomoya omkhulu unokufukula uphahla okanye ubangele ukuba i-seams ihlukane, okubangela ukuvuza. Ukuba uphahla lunomonakalo obanzi okanye ngokwahlulwa komthungo, faka uchwepheshe ukuze ahlole umonakalo ...
INDLELA yokufaka uphahla lwensimbi
ngu admin nge-20-02-10
1 Izixhobo 2 Inyathelo-nyathelo-1 Inyathelo loku-1: Linganisa indawo yophahla 2.2 Inyathelo 2: Uku-odola izixhobo 2.3 Inyathelo lesi-3: Susa uphahla oludala 2.4 Inyathelo 4: Yongeza ukufakelwa. iiphaneli zensimbi 2.7 Inyathelo lesi-7: Yongeza ibengeli eluphahleni 2.8 Inyathelo lesi-8: Gqibezela i-3 Considera yoKhuseleko ...
Indlela yokufaka uphahla olugobileyo
ngu admin nge-20-01-28
Uphahla olugobileyo luyindlela elungileyo yokuphakama kwisitiya somyezo, ivenkile, okanye ipatio. Kuyakhawuleza, kulula, kwaye ungakwenza ngokwakho. Udinga izixhobo nezixhobo ezisisiseko kuphela. Indlela 1. Ukufakela uphahla olugunyazisiweyo 1．Sika iipaneli ubude. Uninzi lweepaneli zide zifike kwiimitha ezingama-9.8 ubude. Al ...
Uyifakelwa njani indawo yokuThintela ukuPaka uPlastiki
ngu admin nge-20-01-15
Uphahla lweplastiki enoburhabaxa luyinto ehlala ihlala kwaye ayilungiso lolunye uhlobo lokuophahla kwesinyithi. Iplastiki ilula kakhulu kwaye kulula ukusebenzisana nayo, yiyo eyenza ukuba ithandwe ngabanini bamakhaya bejonga ukonga imali enokuchithwa ekuqeshweni kwamaqela eengcali. Ukulungiselela ukufaka ...
Ungazisika njani iiPhepha zoPhahla zoPlastiki eziGaziweyo
ngu admin nge 20-01-10
Amashiti ophahla amachiza ayindlela engabizi mali yokugubungela ipatio, indawo yokuchithela okanye eluhlaza, kwaye iyafumaneka ngemibala enjengombala omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza kunye nemibala e-opaque kunye neplastiki ecacileyo. Amaphepha avumela ukukhanya okungasasebenziyo ukuba kucofe uphahla ngelixa kukukhusela kwimvula. Ungayifumana i-corr ...
Ungasisika njani ukuThintela ukuPaka iPlasitiki
ngu admin nge 19-12-31
I-fiberglass enoburhabaxa okanye eluphahleni lwePVC, olunokuthi lube nokudlula okanye i-opaque, lusebenza kakuhle kwiziko lokugcina izityalo, kwizithungu kunye nakwilongezo lweveranda. Ingena kwi-4- nge-8- okanye i-10-eenyawo, kwaye uyifaka ngokuyikroba kwi-brace eyenziwe ngomthi okanye yeplastiki. Izikrweqe zenzelwe ukuba zihambelane nezinto ezibandakanyekileyo kwaye ziqhotyoshelwe ...
Ungayisika njani iphepha?
ngu admin nge-19 ukuya ku-26- 26
Isliphu sePolycarbonate sinokusikwa ngesibini sesandla se-shears ukuba ubungakanani bephepha lingaphantsi kwe-0.125 inches (1/8 ye-intshi). Imathiriyeli yephepha elinamachaphaza kuya kufuneka kusikwe ngendlela yesarha ematshini. Ukusika ngokuthe tye kunokwenziwa ngokusebenzisa isaringi ejikelezayo. Ukusikeka okwenziwe ngendlela ...
I-Polycarbonate Roofing Ofanele Ukwazi
ngu admin nge 19-12-18
Ukuba ukhangela izinto ezingophahla kakhulu kwaye zingabizi kakhulu, jonga uphahla lwe-polycarbonate. Olu nophahla lwe-thermoplastic lwaqala ubomi bayo kwiindawo zokubambisa ngaphambi kokuqhubela phambili kwizakhiwo zorhwebo. Ngenxa yeempawu zayo, nangona kunjalo, iyaqala ukufumana okulandelayo kwintsalela ...
Inombolo yomnxeba: 0086- (0) 757-83128359
Igumbi H, 30 / F, Isakhiwo soPhuculo lweFoshan, uNo.13, i-East Hua Yuanrd, Foshan, Guangdong, China